अन्ततः भोलि सार्वजनिक हुने भयो टेलिकमको ‘नमस्ते पे’ - Tech News Nepal Tech News Nepal
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको मुख्य लगानी रहेको नेपाल डिजिटल पेमेन्ट कम्पनीले भोलिदेखि आफ्नो अनलाइन भुक्तानी सेवा सुरु गर्ने भएको छ । कम्पनीले आवश्यक तयारी पुरा गर्दै ‘नमस्ते पे’ को सेवा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो ।
त्यसो त कम्पनीले यसअघि समेत भुक्तानी सेवा सार्वजनिक गर्ने मिति तय गरेको थियो । तर आवश्यक तयारी पुरा नहुँदा केही ढिलो गरी सेवा सञ्चालनमा आउन लागेको हो ।
नमस्ते पे एप केही महिनादेखि आन्तरिक परीक्षणमा रहेको थियो । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लिराम अधिकारीले ट्वीटरमार्फत नमस्ते पे भोलि मङ्गलबारदेखि सञ्चालनमा आउन लागेको जानकारी दिएका छन् ।
Thank you for your suggestions. Please wait foracouple of days!
— Dilli Adhikari (@dr4955) September 12, 2021
एक जना ट्वीटर प्रयोगकर्ताको सुझावमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले यसको जानकारी दिएका हुन् । कम्पनी स्रोतका अनुसार सुरुवाती समयमा केही सीमित भुक्तानीका विकल्प मात्र उपलब्ध हुनेछन् ।